Firenena 20 ambony indrindra manana mponina tranainy indrindra eran-tany 2022 - Victor Mochere
Firenena 20 ambony indrindra manana mponina tranainy indrindra eran-tany 2022
Mihantitra haingana izao tontolo izao. Na izany aza, misy firenena vitsivitsy, izay miavaka amin'ny sisa, noho ny habetsahan'ny olom-pireneny mihoatra ny 65 taona. Olona efa ho roa lavitrisa eran-tany no antenaina ho 60 taona mahery amin'ny taona 2050, izany hoe avo telo heny noho ny tamin'ny 2000. Noho ny fitomboan'ny isan'izy ireo efa antitra, ny sasany amin'ireo toekarena lehibe indrindra eran-tany dia nanomboka niatrika fisondrotana manaraka. amin'ny saram-pikarakarana ara-pahasalamana, ny saram-pisotroan-dronono ambony kokoa, ary ny fihenan'ny ampahany amin'ny olom-pireneny tsirairay avy miasa amin'ny asa.
Antony lehibe iray nahatonga an'io fironana io ny fampihenana ny tahan'ny fahavokarana any amin'ireo firenena ireo tato anatin'ny folo taona farany, izay vao mainka nampiaraka tamin'ny androm-piainana lava kokoa. Mba hifanaraka amin'ny mponina miha-hantitra, firenena maro no nampiakatra ny taona fisotroan-dronono, nampihena ny tombontsoan'ny fisotroan-dronono, ary nanomboka nandany bebe kokoa tamin'ny fikarakarana be taona. Miaraka amin'ny vitsy kokoa ny isan'ny olona miditra ao amin'ny mponina sy ny olona miaina ela kokoa, ny olona mihoatra ny 65 taona izao dia mitombo ny ampahany amin'ny fitambaran'ny mponina eran-tany.
Ireto ny firenena 20 ambony indrindra manana mponina tranainy indrindra eran-tany.
% ny mponina mihoatra ny 65 taona